Kumisikidza Webhu inoongorora | Martech Zone
Kushandisa Webhu Analytics
Vanhu vazhinji vanotarisa iko kwakajairwa saiti dhizaini uye ivo vanoona Webhu saiti iyo inonongedzera kuKudaidzira kuita uye vozoyera iyo Call to Action kuburikidza neAnalytics, vachiidaidza kuti kupinduka. Dai iwe waizokwevera icho kunze, zvinoita seichi:
Dambudziko, chokwadika, nderekuti Webhu Yekuongorora iri yekugara TONS yezvishongo zvakavanzika zedata izvo hapana anozviteerera kana kusheedzera. Kazhinji, Analytics inoshandiswa chete kuyera masosi, kutsvaga, kudzvanya uye kutendeuka. Ichishandisa iyo mishumo, weKushambadzira nyanzvi anozoita zvimwe zvigadziriso uye mawatch kuti aone zvinoitika mumishumo. Uku kutenderera kwetariro (iwe unotarisira kuti chimwe chinhu chinochinja) chinoitika kakawanda.
Iyo paradigm yekutarisa maAnalytics kungoita seinoratidzira interface inofanirwa kuchinja. Analytics haisi yekungoburitsa interface, inzvimbo isina mutengo wehunhu hwevashanyi. Uchishandisa zvine hunyanzvi, unogona kusanganisa zvirimo zvewebsite yako neako analytics data kuti mushandise zvine simba kugonesa zvirinani kunongedza vashanyi vako.
Mimwe Mienzaniso yeWebhu Ongororo Yekubatanidza
Iwe une 2 vashanyi kuwebhusaiti yako iyo yako Analytics application iri kuteedzera. Mumwe mushanyi anogara achishanyira yako saiti kubva kune imwecheteyo nzvimbo nzvimbo. Mumwe mushanyi anoshanya asi kufamba kwake kunoteverwa muUnited States neCanada. Mune mamwe mazwi, une vaenzi vaviri vakapara, asi mumwe mufambi uye mumwe wacho haazi.
Chigadzirwa chako, sevhisi, kana kunyangwe meseji yako ingagadziriswe sei kune mufambi pane asiri mufambi? Pamwe uri kutengesa zvemagetsi pane yako saiti. Mufambi anofanirwa kuona malaptop akareruka, mabhegi ekufambisa uye zvimwe zvishandiso. Iye asiri-mufambi anofanirwa kuve nemaratidziro epamba rako uye emakomputa ebhizinesi - pamwe yako akateedzana emahara makuru
Pamwe iwe une 'mugwagwa show' pauri kushanyira makuru metropolitan maguta kuratidza zvigadzirwa zvako. Kune asiri-mufambi, iwe unofanirwa kudzora iwo maratidziro emugwagwa kuratidza kunharaunda yavari. Kune mufambi, iwe unogona kugadzirisa kuratidzwa kwemugwagwa kuratidza kumaguta akapoterera nzira dzemunhu dzekufamba.
Kana iwe uri nzvimbo yekudyira, pamwe iwe unoda kuratidza mamwe emaketani ako munzira yemufambi neshoko nezve yako mibairo chirongwa chiripo nyika yese. Kune asiri-mufambi, meseji kubva kuvaridzi kana mashefu kana yako nyowani yekubuda menyu.
Kana iwe uri weKushambadzira Agency, pamwe iwe unofanirwa kunge uri kuratidza yemunharaunda vatengi basa kune asiri-mufambi, uye nyika maakaunzi kune iye mufambi.
Geography ingori chimwe chikamu chekuverenga Analytics. Kana iwe uri chitoro cheZvishongo, ungangoda kushambadza Anniversary yako kutengesa kune mushanyi uyo akatenga Anniversary bracelet makumi mashanu apfuura. Kana iwe uri bhangi, pamwe iwe unoda kukwidziridza yako mareti echikwereti pavhiki pasati yabhadharwa inotevera. Kana iwe uri mutengesi, iwe ungangoda kushambadza yako yekutengesa-mukati kukosha pamota yandakatenga kubva kwauri.
Dynamic Zvemukati zvave zviripo kwenguva yakati wandei muEndaneti Indasitiri. Kune mamirioni euchapupu ekuti kugadziridza zvemukati maitiro evaenzi kunopa mhedzisiro yepamusoro. Yasvika nguva yekuti makambani ekuvandudza Webhu uye Zvemukati manejimendi Sisitimu zvakatanga kutarisisa izvi. Kubatanidza Webhu Analytics muCMS yako kuchaendesa mibairo mikuru.
Nehurombo, emahara mapakeji senge Google Analytics haape iyo API kana danho rekubatanidzwa uko iwe unogona kuwedzera iyo data zvemukati. Nekudaro, mazhinji makuru makambani eWebhu Analytics anoita. Uyu musiyano muzvinhu unogona kudhurira kambani yako makumi ezviuru zvemadhora - asi kana ukaishandisa nemazvo, kudzoka kwekudyara kuchave kwakanaka.
Tags: apple iphonebluetooth kushambadzirabluetooth napedyobluetooth proximity kushambadziraedgerankklout inoyerwa seiproximity kushambadzirakusazvinyora
Dzivisa kutora kubatwa neVagadziri vako
Kutanga svondo rino ndakataura nekambani inonzi Xtract, iri kuFinland. Ivo vane hunyanzvi mukunangana nehunhu uye nguva pfupi yadarika, kunyanya kune social media. Kubva ndichitaura navo, ndakatanga kutarisa mumakambani akafanana ndikawana yekutanga inonzi Sometrics (US Yakavakirwa). Chinhu chakajairika kwaive kugona kupa nyowani masocial network neruzivo rwekuongorora nezve vateereri vavo. Izvi, zvakare, zvinowedzera kukosha kwekushambadzira kwekuita mishandirapamwe neaya echitatu bato pasocial network.
Pamusoro pezvo, ndakatarisa mune zvakatorwa neGoogle mumakore mashoma apfuura uye kuti vari kuvaka sei humambo hwavo. Iwe unotaura kuti Google analytics haisati yapa API, asi ini ndinofunga vanozoita nekukurumidza kwete gare gare. Pamusoro pezvo, iwo muenzaniso wekuti iwe wekushandisa Geography kana uchinongedza unogona kuendeswa kune rinotevera nhanho nezvose zviripo zvemepu uye yekutevera tekinoroji iripo pamusika. Ini ndakanyora kare nhasi nezveGoogle neYahoo Mepu.
Kungofungidzira panguva ino, asi ko kana kambani yakaita seGarmin yaizopinda mubhizinesi rekuongorora uye rekushambadzira. Vaizokwanisa kupa GPS yavo masisitimu uye kuitsiva neyakashambadzirwa inotsigirwa modhi. Kushandisa overlay tekinoroji isingakanganise ruzivo rwemuoni, kuona kuti ruzivo rwemushandisi haruchinje, shambadzo dzinogona kupihwa dzinenge dzanyatsogara kune mufambi. Tora iyo imwe notch mberi uye wedzera mune yako Jewelry store muenzaniso uye une mobile 3.0 advertising. Yakanangwa, mushandisi ane hushamwari uye akadzidziswa neanoongorora mushandirapamwe.
Masendi angu maviri chete: Ndinofanotaura Google Analytics API mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Google yakatarisana neAPI saka ndinoshamisika kuti pasati pave neimwe kusvika parizvino. Ndinoda kuona Analytics 'triggers' .. nemamwe mazwi .. kukwanisa kuita zvikumbiro zvinobuda. API's akanakisa, asi iwe haugone kuita chiitiko kusvika zvapera.